Home News Abaanduulaha CXDS Gen Caanood oo ay is xigaan Farmaajo oo Madaxtooyada ku...
Abaanduulaha CXDS Gen Caanood oo ay is xigaan Farmaajo oo Madaxtooyada ku soo xareeyay gawaarida gaashaaman Iyo Ciidan Badan+Abaabul Milatari oo Socda
Wararka anu ka heleyno Magaalada Muqdissho aya shegaya in Ciidan Xoogan lagu soo daadiyay Magaalada Muqdisho iyadoona Madaxtooyaada Soomaaliya lagu soo daad gureeyay Ciidankii ugu badnaa ee dabaabaadka dagaalka sita.
Abaanduulaha Ciidanka Xooga Dalka General Cabdullaahi Cali Caanood oo qaraabo dhaw yihiin Madaxwdyne Farmaajo aya la shegaya in Mdaxtooyada Soomaaliya uu kuso Xareeyay Gawaarida Gaashaaman ee loo yaaqaan Beebaha iyo kuwa ay wataan AMSIOM oo kale oo horay loo siiyay ciidanka Soomaaliya.
Gen Caanood ayaa hareeraha Madaxtooyada ku wareejiyay gawaaridaas waxaana heegan la geliyay dhamaan ciidanka Koofi Gaduudda ee Madaxtooyada Qaaska u ah xitaa kuwii fasaxa ku maqnaa aya la soo xareeyay.
Ficilka nuucan ah ee Gen Caanood iyo Farmaajo ay Madaxtooyada ka waadan aya ah in awood Milatari u adeegsadaan Xildhibaanada Taagersan Gudoomiye Jawaari iyo Gudoomiyaha Nafsad ahaantiisa.
Madaxweyne Farmaajo aya Gudoomiye Jawaari ku Cadaadiyay tira dhowr Jeer ah sida uu Shirkiisa Jaraa’id kaga hadlay waxana uu hada doonaya in Fuliyo howlihii Maalmihii udanbeeyay uu ka waday Xarunta Gashaandhiga Dalka si dalka uu awood Milatari uu ugu adeeg sado.